Shiinaha Air neefsasho qoorta nasasho barkimo warshad iyo shirkado | AoFeiTe
Taageerada Brace dhexda
Caawinta Dhexdhexaadinta Miisaanka
Gacan & Suxul Brace
Hooyo Iyo Ilmo
Bawdada & Weysha Brace
Ka shaqee jardiinada suunka jilibka iyo qoob ka ciyaarka
Barkinta qoorta nasashada leh ee hawada leh waa la neefsan karaa
Neoprene jilbaha taageerada gacmo-qabashada
Garbaha taageerada jilibka isboortiga culeyska neoprene weightlif ...
Dhabarka gadaal saxeexa garabka taageerada suunka kabaha
Muujinta garabka garabka saxda ah ee garabka hoose ee dhabarka
Habka Duugista:Duugista gadaal
Ku habboon:Kulleeti cad
Goobta Asalka:Hebei, Shiinaha (Dhul Weyn)
Warshadaha:Warshad leh Adeeg Dhoofinta
Kooxda Da'da:Dhamaan Da'da
Cabir:Cabbir Bilaash ah
Adeeg:OEM / ODM
Muunad:La heli karo
Daabacaadda:Habee Logo Is Welcom
Magaca Product:Barkinta Gawaarida Neefsashada Neefsashada Barkinta la buufin karo
Baakadaha:1 gabal / boorso pp
Wax soo saarka:100000 Piece / Cadad bishiiba
Gaadiidka:Badweynta, Berriga, Hawada
Kartida Bixinta:100000 Piece / Cadad bishiiba
Shahaadada:CE / FDA / ISO9001 / ISO13485
Barkinta Gawaarida Neefsashada Neefsashada Barkinta la buufin karo
1. Safarka kaliya ee barkinta qoorta ee la buufin karo ee bixiya TAAGEERADA HOOSE EE JIMCAHA EE Jirka kore taas oo sahleysa nasashada, hurdada, iyo hurdada oo sii dheeraaneysa.
2. Waxay kor u qaadeysaa isku toosinta madaxa iyo qoorta - MADAXA KA HELI LOOGUFURIDDA HORE. Ku habboon kuwa xanuunnada joogtada ah qaba. 3. SII FUDUD KU FUDUD INTA UU NOLOSHOODU NOQOTO OO DEGDEGA UGU SAMEEYA. Dukaamada si hagaagsan ayaa loo dhigaa marka la duubo si loo yareeyo booska wax lagu rakibo. 4. Naqshadeynta naqshadeynta ERGONOMIC waxay bixisaa taageero habboon si looga hortago xiisadda iyo qoorta oo adkaata.
5. QAYBTA: Dadka waaweyn & Carruurta. Waxay u fiicantahay diyaaradaha, basaska, tareenada, gawaarida, kaamamka, boorsada dhabarka, kuraasta curyaamiinta, boosteejooyinka garoonka.
Waxaan khabiir ku nahay daryeelka caafimaadka iyo wax soo saarka lafaha sida Jilibka jilibka Taageerada, Taageerada Gaarka Dib-u-Dheer, Sixitaanka Jirka, Curcurka Brace Taageero, Xusulka Brace Taageero, Brak lugta Taageero, Garabka Garabka Taageero, Taageerada Qoortaiyo wixii la mid ah. Sidoo kale mid ka mid ah adeeggayaga muuqaalkeennu waa AMARKA SAMAYNTA. Waxaan ku soo saari karnaa badeecado leh astaantaada naqshadeynta iyo sanduuqa midabka. Waxaan sugeynaa inaan kula shaqeyno waqti dheer!
Barkinta qoorta nasashada leh ee hawada leh waa la neefsan karaa: (1) Qalabka: Dharka iyo dhogorta jilicsan ee jilicsan ee soo qulqulaya PVC. (3) Si kasta oo aad u safartid ama aad guriga ku nasatid, barkimadu wey ilaalin kartaa qoortaada waxayna kaa dhigeysaa mid aad u raaxeysaneysa. (4) Daboolka waa mid la dhaqaajin karo lana dhaqi karo. (5) Baakad aad u yar oo fudud. Waad ku ridi kartaa xitaa jeebka dhinaca ee boorsada maalinta. (6) La kulan heerarka pro65.
Maxaad Noogu Doortaa Aofeite: 1. Warshad dhab ah oo leh mashiinno iyo shaqaale xirfad leh. 2. Shaqaale khibrad u leh ganacsiga shisheeyaha. 3. Alaab qeybiye dahab ah. 4. Waxaan aqbali karnaa amar yar iyo amar OEM. 5. Tayo heer sare ah, oo leh CE / FDA iyo shahaadada ISO. 6. Qiimaha tartanka iyo keenista degdegga ah, dhammaan habka maraakiibta waa la aqbalaa. 7. Qaabka lacag bixinta ee kala duwan, LC, TT, Western Union, Money Grame iyo Paypal. 8. Dammaanad hal sano ah iyo adeegga iibka kadib. 9. Waxaan rabnaa inaan weynaano macmiishayada si wada jir ah.
Ma waxaad raadineysaa soo saaraha barkinta Gawaarida Gawaarida Gawaarida & qeybiyaha? Waxaan haynaa xulasho ballaaran oo qiimo aad u fiican ah si aan kaaga caawino inaad hal-abuur yeelato. Dhammaan barkimooyinka nasashada ayaa tayo leh. Waxaan nahay Shiinaha Asal ahaan Factory of Neck barkinta la buufin karo. Haddii aad qabtid wax su'aal ah, fadlan si xor ah u nala soo xiriir.
Qeybaha Wax soo Saarka: Qoorta Taageerada Brace
Hore: Colombian ceragem dhexda suunka sare waders tababaraha
Xiga: Duuduub qoorta oo jilicsan ayaa taageera barkinta safarka
Qoorta nasashada Neck Massager Xanuunka Madaxa Ha ...
Qalabka Jilicsan ee Hawada La Saarayo
Hawo jarista ilmagaleenka ee la jarjarayo qoorta d ...
Barkinta xusuusta qoorta la tuuro xuubka safarka xumbo
Cudurka Taranka ee Afka ilmagaleenka ee La Beddeli Karo ...
U qaabeeya barkin taageero qoorta la buufin karo
Dhinaca bari iyo koonfur-galbeed dabaqa afaraad ee NO.202 ee Griiga oo taageeraya jardiinada warshadaha, No.389 ee wadada Hengshan, Aagga teknolojiyada sare, Shijiazhuang, Shijiazhuang, Hebei